China 1X4 Led Troffer, 1X4 Na-eme ka ọkụ, 1X4 Recessed Troffers Supplier
Nkọwa:1X4 Na-echegbu,1X4 Na-agba Mgba,1X4 ndị agha na-atụgharị uche,1X4 Ndị omempụ,,
Home > Ngwaahịa > Enwusi Ìhè > 1x4 Na-enwusi Ìhè
Ngwaahịa nke 1x4 Na-enwusi Ìhè , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, 1X4 Na-echegbu , 1X4 Na-agba Mgba suppliers / factory, wholesale high-quality products of 1X4 ndị agha na-atụgharị uche R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
1x4 25W Ebube na-eme ka ihe nkwụnyeghachi  Kpọtụrụ ugbu a
1X4 40W Led Troffer Fixtures Retrofit Kit  Kpọtụrụ ugbu a
Ọnụahịa otu: USD 25.99 / Piece/Pieces
Bbier 1x4 Mmiri na-egbuke egbuke na- enye ndị ọzọ aka na-eme ka ndị na-ahụ maka ọdịmma nke fluorescent, nke ruru 120 lumens per watt. Nke a na- agbanye ọkụ dị na 0-10v dimming ma ọ bụ nzọụkwụ na-emetụta na afọ 5 warranty.Our Led Troffer Retrofit dị...
Ọnụahịa otu: USD 26.99 / Piece/Pieces
Belata ikike ị na-eji eletrik eme ihe na Ngwá Ọrụ Ngwá Agha Led Troffer Retrofit Kit nke ahụ na-eji 40W ike, na-egbutu oke ego gị ụgwọ eletrik kwa ọnwa! Agbanwe na-enweghị ntụpọ na ntụpọ ọkụ ọkụ 4FT gị dị mma. Onye ọ bụla Ogologo ihe ngbochi nke a...
China 1x4 Na-enwusi Ìhè Ngwa
Ebugharị 1x4 Ebube na-agba ọkụ na Panel. Ihe na-agba ọsọ na- adaba na Fluorescent versus LED . Mgbe ị na-achọ gị 1X4 Dugara Troffer, ị ga-ahụ na anyị na-enye dị iche iche ìhè eletrik ekwekọghị. Ndepụta anyị nke fluorescent 1X4 Na-enwete ọkụ bụ ọnụ na mfe ịwụnye. Ike na-arụ ọrụ nke ọma 1X4 Ndị na- arụ ọrụ ego maka ụlọ ọrụ ụlọ elu ụlọ ọrụ ọkụ na- eji ọkụ na-ewu ewu.
1X4 Na-echegbu 1X4 Na-agba Mgba 1X4 ndị agha na-atụgharị uche 1X4 Ndị omempụ 2X4 Na-echegbu